Maxamed Cumar Carte oo la kulmay Madaxa Hawlgalka EU ee la dagaalanka burcad badeeda – idalenews.com
Maxamed Cumar Carte oo la kulmay Madaxa Hawlgalka EU ee la dagaalanka burcad badeeda
Muqdisho(INO)- Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka Soomaaliya, Maxamed Cumar Carte, ayaa maanta kulan la qaatay Madaxa Hawlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka burcad badeeda, Major General Rob Margowan, iyagoona ka wada hadlay sidii loo ciribtiri lahaa kooxaha burcad badeeda.
Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka, ayaa sheegay in xukuumada ay kasoo horjeedo kooxaha burcad badeedda islamarkaana ay dooneyso in la la dagaalamo, si loo ciribtirana ay muhiim tahay iin shaqo abuuris loo sameeyo dhalinyarada.
‘’Xukuumad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan isu kaashano la dagaalanka kooxa burcad badeedda, si aan u joojino dhalinyarada ku biireyso kooxahaas; waa inaan isku kaashanaa sidii shaqo abuuris loogu sameeyn lahaa dhalinyarada degan dhul xeebeedka ee ay u sahlantahay iney ku biiraan kooxahaas.” Ayuu yiri Maxamed Cumar Carte.
Carte, ayaa sidoo kale uga mahadceliyay howlagalka midowga Yurub ee la dagaalanka burcad badeedda sida ay uga go’antahay in badda Soomaaliya ay noqoto mid xur ka ah burcada.
Carte, ayaa yiri ‘’Waan idinkaga mahadnaqayaa sida aad ugu dadaaleysaan ka sifeynta kooxa burcada badda Soomaaliya oo muhiim u ah qaaradda iyo aduunkaba.”
Ugu dambeen Ra’iisal Wasaare Ku Xigeenka, ayaa ku dhiirageliyay Sarkaalka ka socday Midowga Yurub in ay laba laabaan howshooda.
Madaxweynaha Turkiga oo shaqadii ka ceyrisay 543 garyaqaano iyo dacwo oogayaal hor leh